Kooxaha gobolka ee leh Premera Blue Cross si ay u maalgashadaan $ 2.24 milyan si kor loogu qaado awoodda daryeelka dhibaatooyinka maskaxda ee miyiga - Wasaaradda Ganacsiga ee Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Kooxaha gobolka oo leh Premera Blue Cross si ay u maalgashadaan $ 2.24 milyan si loo kordhiyo awoodda daryeelka dhibaatooyinka maskaxda ee miyiga
Iskaashatada gaarka ah ee gaarka loo leeyahay iyo tan gaarka ah ayaa maalgelisa deeqaha raasamaalka taas oo u abuureysa fursado badan dadka si ay u helaan heerar badan oo ah daryeelka xasilinta dhibaatooyinka maxalliga ah ee bulshada gobolka oo dhan.
OLYMPIA, WA - Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington ayaa maanta ku dhawaaqday $ 2.24 milyan oo deeqo raasumaal ah oo la siiyay seddex bixiye daryeel caafimaad oo dhaqan ah guud ahaan gobolka. Maalgelinta waxaa lagu bixiyaa iskaashi hal-abuur leh oo lala yeesho Premera Blue Cross - oo ah kii ugu horreeyay noociisa ee gobolka Washington - wuxuuna dhigayaa awoodda loo baahan yahay ee daryeelka xasilinta dhibaatooyinka caafimaad ee bulshada miyiga.
“Meesha aad ku nooshahay maahan inay caqabad ku noqoto daaweynta habboon ee deg-degga ah ee loogu talagalay dadka ay soo foodsaartay dhibaato caafimaad. Waxaan ku faraxsanahay inaan la shaqeyno Premera si aan u horumarino noocyo dhameystiran oo ah daryeelka caafimaadka habdhaqanka ee loogu talagalay dadka degan bulshada reer miyiga ah ee Washington, ”ayay tiri Agaasimaha Ganacsiga Lisa Brown. Deeqahaani waa maalgashi muhiim ah mustaqbalka daryeelka caafimaadka maskaxda ee ku saleysan bulshada ee guud ahaan gobolka. ”
Jeff Roe, madaxweynaha iyo agaasimaha guud ee shirkadda 'Premera Blue Cross' ayaa yiri: "Qorshe caafimaad oo daboolaya dhamaan gobolka Washington, inbadan oo kamid ah xubnaheena waxay ku faafeen aagag aad u balaaran oo caafimaad ahaan aan daryeel caafimaad loohelin." "Baahiyaha caafimaadka habdhaqanka ayaa kor u sii kacaya, waana mid muhiim ah in la maalgashado xalal wax ku ool ah, oo muddo dheer ah si loo xiro farqiga sii kordhaya ee u dhexeeya helitaanka daryeelka caafimaadka ee magaalooyinka iyo reer miyiga."
Mashaariicda la siiyay maalgelinta waxay siin doonaan dadka dhibaatooyinka ku jira fursado badan oo daaweyn ah oo ugu dhow guriga iyo qoyska. Intaa waxaa sii dheer, waxay ka xisaabtami doonaan heerarka kala duwan ee baahida, iyagoo hubinaya in shaqsiyaadka ay helaan heerka daryeelka ee ku habboon. Daryeelka qalalaasaha waxaa loola jeedaa in lagu xasiliyo qofka si aysan ugu gudbin heerarka sare ee daryeelka. Deeqaha waxaa la siiyay:
Daryeel Caafimaad oo dhameystiran - Mashruuca Xasilinta Dhibaatada ee Klickitat, oo ku yaal White Salmon, ayaa lagu abaalmariyay $ 338,650 dib-u-habeyn taas oo u oggolaan doonta laba cusbooneysiin oo cusub oo 23-saacadood ah iyo adeegyada bukaan-socodka xasilinta dhibaatooyinka caafimaad ee hab-dhaqanka la xiriira.
Aasaaska MultiCare - Mashruuca Unugga Xasilinta Dhibaatada ee Isbitaalka Deaconess, oo ku taal magaalada Spokane, ayaa lagu siiyay $ 1 milyan dayactir taas oo abuureysa cutub cusub oo xasilinta xiisadaha 22-sariir ah oo ku dhegan waaxda xaaladaha deg-degga ah ee Isbitaalka Deaconess ee adeegyada bukaan-socodka xasilinta dhibaatooyinka caafimaadka hab-dhaqanka.
Saddex Daaweyn Webi - Mashruuca Xarunta Xasiloonida Dhibaatada ee Saddexda Wabi, oo ku taal Kennewick, waxaa lagu abaalmariyay $ 904,470 $ dhismaha bukaan-socodka cusub ee caafimaadka dhimirka iyo xarunta xasilinta dhibaatooyinka.
Maalgashiyadu waxay taageeraan Gov. Jay Inslee's qorshe shan sano ah si loo casriyeeyo loona beddelo nidaamka caafimaadka maskaxda ee Washington, iyadoo ujeedadu tahay in la joojiyo meeleynta bukaan-socodka madaniga ah ee isbitaalada waaweyn ee gobolka sanadka 2023 iyadoo laga doorbidayo dhismayaal yar yar oo bulshada ku saleysan.
Deeqaha waxaa lagu bixiyay iyada oo loo marayo nidaam tartan ah oo ay fulisay Ganacsiga iyada oo taageero laga helayo hay'adaha la-hawlgala: Waaxda Caafimaadka, Hay'adda Daryeelka Caafimaadka ee Gobolka Washington iyo Waaxda Carruurta, Dhallinyarada iyo Qoysaska. Lacagaha waxaa loogu talagalay kharashka dhismaha iyo qalabka ee laxiriirta aasaasida tas-hiilaadka waana in loo ilaaliyaa sida loogu talagalay ugu yaraan 10 sano.
Dhaqaalahan deeqda ah ayaa ka faa'iideysan doona $ 1.3 milyan oo dheeri ah maalgashiga dhismaha oo laga helayo ilo kale oo dawladeed iyo kuwo gaar loo leeyahay.
Ganacsigu wuxuu kaloo maamushaa Barnaamijka Xarumaha Caafimaadka Habdhaqanka ee Gobolka, oo sanad kasta lagu abaalmariyo lacagaha raasumaalka ah ee ay ugu talagashay Sharci dejintu xarumaha bixiya xulashooyinka daaweynta caafimaadka hab dhaqanka ee bulshada. Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan barnaamijka iyo helitaanka maalgelinta mustaqbalka, booqo Ganacsiga website.
Deeqaha bulshada iyo amaahdadeeqoWar-saxaafadeedbulshooyinka reer miyiga ah
← Ganacsiga wuxuu bilaabayaa wareeg cusub oo ah tababarro ganacsi oo khadka tooska ah oo bilaash ah, oo ay kujiraan fasalka koowaad ee fiidkii Toddobaadka Xuquuqda Dhibbanayaasha Dembiyada →